Uhlobo olusha lwe-KDE Plasma 5.16 lufika futhi lezi yizindaba zalo | Kusuka kuLinux
Uhlobo olusha lwe-KDE Plasma 5.16 lusanda kukhishwa, idalwe ngeplatifomu ye-KDE Frameworks 5 kanye nomtapo wezincwadi we-Qt 5 nge-OpenGL / OpenGL ES. Lapho kule nguqulo entsha ye-KDE Plasma kukhona ukuthuthuka okusha emvelweni.
phakathi ukuthuthuka okuyinhloko esingakuthola ukuthuthuka kohlelo lokwazisa, Ukulungiswa kwesikrini sasekhaya, ukuxhaswa kweWayland, nokunye okuningi.
1 Yini okusha ku-KDE Plasma 5.16
1.1 Ukusebenzisana okuthuthukisiwe kwewijethi
1.2 Iseva yezithombe
1.3 Isikhungo Sokufaka Izinhlelo Zokusebenza kanye nama-plugins
Yini okusha ku-KDE Plasma 5.16
Ngokukhishwa kwale nguqulo entsha singakugqamisa lokho Ukuphathwa kwedeskithophu, izinto ezibonakalayo kanye namawijethi kuthuthukisiwe.
Injalo inqubo yohlelo lwezaziso ebhalwe kabusha ngokuphelele. Imodi yokungaphazamisi ingeziwe ukukhubaza okwesikhashana izaziso, ukuqoqwa okuthuthukisiwe kwamarekhodi kumlando wokwamukela izaziso, inqobo nje uma izaziso ezibucayi zingakhonjiswa lapho izinhlelo zokusebenza zisebenza ngemodi yesikrini esigcwele, imininingwane mayelana ikhophi lefayela bese uhambisa ukuqeda, isigaba sezilungiselelo zezaziso kumhleli sinwetshiwe.
I-interface yokukhetha izingqikithi iyasetshenziswa ukusebenzisa kahle izingqikithi kumaphaneli. Izici ezintsha zengezwe ngamatimu, kufaka phakathi ukusekelwa kokunquma iwashi le-analog nokufiphala kwangemuva kuzindikimba zonke.
Kumodi yokuhlela kwephaneli, inkinobho ethi "Khombisa ezinye izindlela ..." ivele, ikuvumela ukuthi ushintshe iwijethi ngokushesha kokunye okukhona.
Idizayini yezikrini zokungena nezokungena ngemvume zaguqulwa, kufaka phakathi izinkinobho, izithonjana namalebula;
Ukusebenzisana okuthuthukisiwe kwewijethi
Kuwijethi ukuthola umbala wamaphikseli angenasizathu esibukweni kungezwe ukusekelwa kwemibala ehambayo kubahleli bombhalo nama-palettes abahleli bokuqhafaza.
Kungezwe isibonisi somsebenzi wokurekhoda umsindo ezinhlelweni zokusebenza kutreyi yesistimu, lapho ungashintsha khona ngokushesha ivolumu ngesondo legundane noma uthulise umsindo ngenkinobho yegundane eliphakathi.
Ewindini elinamasethingi wangemuva wedeskithophu, kumodi yesilayidi, izithombe zezinkomba ezikhethiwe ziboniswa ngamandla wokulawula ukumakwa kwazo.
Imenyu yokuqukethwe ihlelwe kabusha kumphathi womsebenzi futhi ingeze ukusekelwa kokuhambisa ngokushesha iwindi kusuka kunoma iyiphi ideskithophu ebonakalayo iye kule yamanje ngokuchofoza inkinobho yegundane ephakathi.
Engqikithini yeBreeze yezithunzi zamawindi namamenyu, ukusetshenziswa komnyama kuyabuyiselwa, kuthuthukise ukubonakala kwezinto eziningi lapho kusetshenziswa izikimu zombala omnyama.
Olunye ushintsho olubalulekile ku-KDE Plasma 5.16 ngu ukusebenzisa ukwesekwa kokuqala kweseshini esekwe eWayland lapho usebenzisa abashayeli be-NVIDIA abaphethe.
Amasistimu anomshayeli we-NVIDIA ophethe osebenzisa i-Qt 5.13 nawo anezinkinga ngokuhlanekezelwa kwemidwebo ngemuva kokubuya kwimodi yokulala.
Eseshini esuselwe kuWayland, ivele ngokuhudula futhi ilahle uhlelo windows usebenzisa i-XWayland neWayland.
Ngayo kubuyekezwe izihloko zemodi yokubuka kuqala kusikrini sokungena ngemvume sezilungiselelo futhi inketho yokuqalisa kabusha ingezwe ekhasini lezilungiselelo ze-Session (Desktop Session) ngokushintshela kumodi yokumisa i-UEFI.
Kanye nokusekelwa okugcwele kokwenza ngokwezifiso iphedi yokuthinta lapho usebenzisa umshayeli weLibinput kuX11.
Isikhungo Sokufaka Izinhlelo Zokusebenza kanye nama-plugins
Ekhasini elinezibuyekezo zezinhlelo zokusebenza namaphakheji, amalebula ngamanye manje "alandiwe" futhi "afakiwe.
Inkomba yathuthukiswa kusukela ekuqedeni ukusebenza, ingeze umugqa ogcwele wokuhlola ukuqhubeka kwesenzo. Lapho uhlola izibuyekezo, kunikezwa inkomba "Ematasa";
Ukusekelwa okuthuthukisiwe nokwethenjelwa kwamaphakeji ngefomethi ye-AppImages nezinye izinhlelo zokusebenza kumkhombandlela wesitolo.kde.org.
Kungezwe inketho yokuphuma kuhlelo ngemuva kokuqeda imisebenzi yokufaka noma yokuthuthukisa.
Kumenyu ye- «Imithombo» ukuboniswa kwezinombolo zenguqulo zezinhlelo zokusebenza ezitholakalayo ukufakwa emithonjeni ehlukahlukene kungeziwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Uhlobo olusha lwe-KDE Plasma 5.16 lufika futhi lezi yizindaba zalo
IMozilla ifuna ukunikela ngezinguqulo zePrimiyamu zezinsizakalo zayo zeFirefox
I-LMMS, ithuluzi lokwenza umculo, ithola isibuyekezo esisha ngemuva kweminyaka engu-4